Harrier No. Cv8818 Racing Car With Remote Control | Buy online | SHOP.COM.MM
Harrier No. Cv8818 Racing Car With Remote Control
အရှည် ၉. ၅လက်မ
အကျယ် ၄ လက်မ
သစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ နာမည်ကြီး ပြိုင်ကားဒီဇိုင်း bagutti speed car ပဲဖြစ်ပါတယ်။ remote control ဖြင့် ရှေ့နောက်၊ ဘေးဘယ်ကွေ့ဝိုက်ခြင်း၊ မီးများပါဝင်၍ ညအခါမောင်းခြင်း lir trimmer ပါဝင်သဖြင့် ထိမ်းညှိပေးပါတယ်။ rechargable aa size ဓါတ်ခဲ၎လုံးအသုံးပြုပြီး ၂နာရီခန့် မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။
No. Cv8818 Racing Car With Remote Control
Specifications of No. Cv8818 Racing Car With Remote Control